मोबाइल सेवामा थप कर: सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपैयाँ सरकारलाई - Himali Patrika
मोबाइल सेवामा थप कर: सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपैयाँ सरकारलाई
हिमाली पत्रिका १४ साउन २०७७, 9:57 am
दूरसञ्चार सेवामा पछिल्लो समय सरकारले कर थप गर्दै आएको छ। कर थपिँदै गएपछि प्रविधिमा आएको विकासले सस्तो सेवा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको सुविधा खोसिएको छ।
डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि मात्र मोबाइल सेवामा दुई प्रकारका कर गरेर १५ प्रतिशतसम्म थप गरेका छन्।
कुनै पनि उपभोक्ताले मोबाइल सेवाको उपभोग गर्दा अब २९ प्रतिशत बढी प्रत्यक्ष कर तिर्नुपर्ने छ। यही साउनदेखि पोष्टपेड सेवाग्राहीले पनि प्रत्येक बिलिङमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क नामको कर तिर्नुपर्ने भएपछि सबै प्रकारको मोबाइल सेवाको कर २९ प्रतिशत भएको हो।
उपभोक्ताले मोबाइलमा सय रुपैयाँ रिचार्ज गर्दा २९ रुपयाँ बढी कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने छ।
सय रुपैयाँको रिचार्जमा सुरुमा २ प्रतिशत स्वामित्व शुल्क लाग्ने छ। त्यस्तै १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्छ।
यो वर्ष भने सरकारले पोष्टपेड मोबाइलमा २ प्रतिशत कर थप गरेको हो।
यो बाहेक यो वर्षको आर्थिक ऐनअनुसार प्रत्येक सिमकार्ड खरिद गर्दा सुरुमा २ प्रतिशत शुल्क पनि लाग्छ।
मोबाइल इन्टरनेट बाहेकको इन्टरनेटमा भने १३ प्रतिशत सेवाशुल्क र १३ प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि कर लाग्छ। सेवा शुल्क लगाउँदा भने मर्मत शुल्कको आधा रकमलाई मात्र करयोग्य मूल्य मानिने व्यवस्था छ।
विद्युतीय गाडीमा लगाइएको करमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग विद्युतीय सवारी तथा विद्युतीय साधनमा कर बढाउनुको कारण माग गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा बढाएको कर संसदबाट पास भई कार्यान्वयनसमेत भइसकेको छ ।
यसअघि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्ने गरेकोमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिदिएका थिए । यस्तै, १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भन्सार दर पनि ८० प्रतिशत (जसमा आधा छूट हुने व्यवस्था छ ) पुर्याएका थिए ।
गैरसरकारी संस्था जुरी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर विद्युतीय साधनमा कर बढाउने सरकारी निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो । नेपालको संविधानको मौलिक हक तथा वातावरण संरक्षण ऐनको मर्म विपरीत आर्थिक ऐनले विद्युतीय साधनमा अत्यधिक कर वृद्धि गरेको जुरी नेपालको तर्क छ । यस्तो निर्णय वातावरण संरक्षणका सम्वन्धमा राज्यको दीर्घकालिन सोच र प्राथमिकता विपरित भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा अत्यधिक कर लगाउने कार्यले विद्युतीय साधनलाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्याएको र विद्युतीय साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरेको जिकिरसमेत गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त विषय गम्भीर प्रकृतिको भएकाले अग्राधिकार दिई पेसी तोक्न भनेको छ ।
रिटमा कर बढाउँदा विद्युतीय सवारी साधनलाई आयातमा बढी आर्थिक दायित्व पर्ने र त्यसले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको उल्लंघन हुने जिकिर गरिएको छ । साथै, कर बढाउने कार्य वातावरण संरक्षण ऐन र सरकारले विद्युतीय ऊर्जालाई महत्व दिने गरी तर्जुमा गरेका विभिन्न रणनीति र कार्ययोजनाको समेत विपरीत हुने दावी गर्दै परमादेशको आदेश पनि मागिएको छ ।
रिट निवेदनमा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि अलग्गै राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन, वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएका आदेश तथा फैसलाहरुको कार्यान्वयनका लागि विज्ञ समूह गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।